Antananarivo : Niampy 76MW ny famatsiana herinaratra -
AccueilRaharaham-pirenenaAntananarivo : Niampy 76MW ny famatsiana herinaratra
13/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Ho nofinofy sisa izany delestazy izany”. Io no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ilay tobi-pamokarana herinaratra vaovao eny Ambohimanambola.
Nampitondraina ny anarana Tobim-pamokarana herinaratra Noor 1 sy Noor 2 izany, ary mamokatra herinaratra hatrany amin’ny 76 MW. Voalaza fa mamokatra herinaratra 48 MW ny Noor 1 raha 28 MW kosa ny Noor 2.
Araka izany, ny orinasa Jovena, izay ao anatin’ny vondrona Axian kosa no mitantana io tobim-pamokarana herinaratra vaovao eny Ambohimanambola io. Voalaza ihany koa fa ny orinasa Jovenna no mamatsy ny menaka mavesatra hampandehanana ity tobim-pamokarana Noor vaovao ity.
Nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny lahateny nataony fa tsy maintsy mitondra angovo isika hoenti-mampandroso ny firenena, ary hitondrana hazavana ho an’ny vahoaka malagasy. “Rehefa misy ny fahavononana dia vita foana ny manangana fotodrafitrasa na dia lehibe tahaka ny inona aza. Iza no nieritreritra 5 taona lasa fa ho tonga amin’izao ny firenentsika? Ho tonga any amin’ny vahoaka malagasy any ambanivohitra rehetra any ny herinaratra. Izay no mahatonga ahy milaza fa ataovy namana ny fotoana ho fampandrosoana ny firenena”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Nampiany ary notsindriany mafy ihany koa fa efa miampita tsikelikely amin’ny fampiasana ny angovo azo havaozina ihany koa i Madagasikara satria manan-karena amina loharanon’angovo rahateo ny firenena.
Mizara ho roa miavaka tsara kosa ny famokarana, ka ny Austral Turbomachine no misahana ny Noor 1 raha ny Aggreko kosa no misahana ny Noor 2.
Raha ny fanazavana, tany amin’ny taona 2015 no niaingan’ny tetikasa amin’ny fanampiana famatsiana herinaratra amin’ny tambazotra mifanjohy eto Antananarivo rehefa azon’ny Vondrona Axian ny tolo-bidy iraisam-pirenena nataon’ny orinasa Jirama. Notontosaina kosa ny fifanarahana 3P teo amin’ny Jovenna sy ny Jirama ary ny minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’Afo (MEEH), ny volana oktobra 2015.
Raha ny nambaran’ny minisitry MEEH, Lantoniaina Rasoloelison, fa mbola mivarotra herinaratra amin’ny fatiantoka hatrany ny orinasa Jirama. Izany anefa, hoy izy, tsy manakana ny fampandrosoana amin’ny fanavaozana ny tontolon’ny herinaratra eto amintsika. Izay indrindra no nahatonga ny fampiasana ny menaka mavesatra amin’ny fanodinana ireo milina mpamokatra amin’ireo tobi-pamatsiana herinaratra satria mora vidy kokoa, izay mampihena ny fandaniana, ka ahafahana ny mampifandaja ny masonkarena sy ny vidy hamarotana ny herinaratra amin’ny mpanjifa.
Noho izany indrindra, dia mitombo ny famatsiana herinaratra ho an’ny tambazotra mifanjohy eto Antananarivo. Azo heverina, araka izany, raha ny nambaran’ny minisitra hatrany, fa hahatratra ireo tanjona napetraka ny orinasa Jirama izay hamaliana ny tinadin’ireo rehetra mikasa hampiditra jiro ao an-tokantranony. Anisan’ny tafiditra amin’izany koa ireo orinasa.
Hitombo, araka izany, koa ny tahan’ireo mponina hisitraka herinaratra ary hitombo ihany koa ny ambaindain’ny toekarena malagasy.
Ankoatra izay, dia voalaza fa hametraka fotodrafitrasa famokarana herinaratra ao Volobe ihany koa ny Vondrona Axian hatramin’ny taona 2022, izay hamokarany herinaratra hatrany amin’ny 120 MW.